महिलाहरु को लागि यथार्थवादी पुरुष सेक्स गुडिया यहाँ सर्वश्रेष्ठ समलैंगिक ठूलो लिंग
बिक्रीको लागि लि Cheap्गको साथ सस्तो लाइफ साइज रियल पुरुष सेक्स डल
हाम्रो पुरुष टर्सो सेक्स पुतलीले गुणस्तरीय अनुभव र दुर्व्यसनी पुरुष वा कामुक महिलाहरूको लागि उच्चतम सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ। पुरुष सेक्स पुतली धड़ जीवित मानिसहरूको लागि समस्या उत्पन्न नगरी तपाईलाई सबैभन्दा प्रामाणिक अनुभूति दिनुहोस्। प्रत्येक व्यक्तिले यस समलिङ्गी पुरुष सेक्स पुतलीको साथ तपाईंको कामुकता अन्वेषण गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ, महिलाहरूको लागि पुरुष सेक्स पुतलीले तपाईंलाई सबैभन्दा राम्रो चरम उत्तेजित गराउनेछ। पुरुष र महिला सेक्स पुतली जुन सबै यौन झुकाव भएका र अलमलिएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्न सक्छन्। तपाईले पुरुष सेक्स डल भिडियोसँग लाइफ साइजको पुरुष सेक्स पुतली कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिक्न सक्नुहुन्छ। कृपया सानो र सानो पुरुष सेक्स पुतलीप्रति ठूलो नकारात्मक पक्षपात नगर्नुहोस्, जुन पुरुष पुतलीमा जारी रहनेछ। यो उत्तम पुरुष सेक्स डलको लागि अनुकूल छैन। , तिनीहरू अति यथार्थवादी पुरुष सेक्स पुतली हुन् जसले तपाईंको पुरुष सेक्स डल लिंगलाई सन्तुष्ट पार्नेछ।
महिलाले पुरुष रोबोट सेक्स डल किनेर रमाइलो गर्छन्। कहिलेकाहीँ तिनीहरू आफैले यो गर्छन्, अन्य अवस्थामा तिनीहरू आफ्नो पार्टनरसँग गर्छन्। पुरुषहरू जस्तै, महिलाहरू प्रयोग गर्छन् DHDOLL आफ्नो यौन कल्पना व्यक्त गर्न र मनोरञ्जन गर्न। उनीहरुले गे सेक्स डलसँग सेक्स गर्छन् । पुरुष पुतलीहरू फरक प्राथमिकताहरू छन्। लगभग हरेक पूर्ण आकारको पुरुष सेक्स डल र पुरुष सेक्स खेलौना मांसपेशी छन्। धेरै पुरुष लैंगिक पुतली हटाउन योग्य पेनलइल एट्याच्मेन्टहरू छन् जुन आदानप्रदान गर्न मिल्छ। थप रूपमा, अनुहार सुविधाहरू, छाला टोन र सस्तो पुरुष सेक्स पुतली को पबिक कपाल पनि अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
अनुकूलन एक उत्तम यथार्थवादी पुरुष Sexdolls
यदि तपाईंलाई युवा पुरुष सेक्स डल मनपर्छ भने, urdolls मा एक अनुकूल पुरुष सेक्स पुतली प्राप्त गर्नुहोस् जहाँ पुरुष हस्तमैथुन गर्ने सेक्स पुतली जीवनमा आउँछ। यदि तपाईंलाई धेरै मनपर्छ भने, हामी तपाईंबाट सुन्न चाहन्छौं: के त्यहाँ पुरुष सेक्स डल छ?
बिक्रीको लागि पुरुष सेक्स पुतलीहरू विशेष रूपमा बनाइएका छन् र शारीरिक पूर्णताको लागि डिजाइन गरिएका छन्। हाम्रा पुरुष पुतलीहरूमा दुई-तर्फी प्रवेश कार्य छ। त्यो अत्यधिक अनुकूलन योग्य छ र यी पुरुष सेक्स खेलौना पुतली अन्ततः मनमोहक असन्तुष्टिको लागि थोरै ठाउँ छोड्छ। हामीसँग धेरै महिला ग्राहकहरू छन् जो वास्तविक जीवनको पुरुष सेक्स डल साथीको रूपमा किन्न इच्छुक छन्। अनुकूलनको लागि पर्याप्त कोठाको साथ, जो कोहीले पनि आफ्नो लागि उत्तम पुरुष सेक्स डलहरू सिर्जना गर्न सक्छन्। पुरुष एनिमे सेक्स पुतलीलाई जीवनदायी न्यानोपन प्रदान गर्न आन्तरिक तताउने प्रणालीसँग सुसज्जित गर्न सकिन्छ। ब्लो अप मेल सेक्स डल वा इन्फ्लेटेबल पुरुष सेक्स डलले यो भावना प्रदान गर्दैन। यसबाहेक, TPE मोडेल अधिक लचिलो छ। किन्नर सेक्स डलहरू पनि सामान्यतया सिलिकन मोडेलहरू भन्दा सस्तो हुन्छन्।
Urdolls स्टोरले विभिन्न प्रकारका शैली र शैलिहरूमा उच्च गुणवत्ताको पुरुष सेक्स पुतलहरू प्रदान गर्दछ। यहाँ तपाईं आफ्नो अर्को आधा पाउन सक्नुहुन्छ, उहाँ एक्लो रातमा तपाईंलाई सुरक्षाको भावना दिन सक्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई तपाईंको कुनै पनि आवश्यकताहरू पूरा गर्न नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तपाईं बाक्लो मांसपेशिहरु लाई छुने को लागी प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्न, उहाँको सुन्दर अनुहार हजारौं केटीहरु द्वारा खोजी गरीएको छ। उसलाई छिटो गर्नुहोस्।
राएलिन - ठूलो लिंग १162२ सीएम पुरुष सेक्स डॉल
प्रेस्ले - ठूलो लिंग १175 सीएम प्रेम TPE Irontech डॉलहरू
Monroe 175cm Irontech Doll हेड चार्ल्स कांस्य TPE Sex Doll
Hyman - 175CM महिला मास्टर्बेटर्स केटा केटा ठूलो लिंग TPE पुरुष सेक्स डलको साथ
Meg 175cm Irontech Doll हेड निकोलस कांस्य TPE Sex Doll
ओलिभर 175 सेमी आइरनटेक डल हेड विलियम कांस्य TPE सेक्स डल
डायर उच्च गुणस्तर महिला लाइफलाइक सेक्स डल सुन्दर 141CM छोटो खैरो कपाल TPE लिंग 13cm 16cm वैकल्पिक
तालिया - पुरुष १C० सीएम व्यावहारिक वयस्क प्रेम डब्ल्यूएम गुड़िया
१175 सेमी सिलिकॉन टाउको नर बच्चा हप्ता नम्बर general ० सामान्य छाला क्विटा डॉलहरू
१165 सेन्टिमिटर पुत्री पुफू नं 87 जिओ मिंग क्विटा गुड़िया
ब्राडी 160CM नम्बर3हेड पुरुष पुतली नम्बर3हेड लाइट ब्राउन TPE सेक्स डल
राहेल - १175 सीएम सेक्सी ब्यूटी लव डब्ल्यूएम गुड़िया
Urdolls मा कमबख्त पुरुष सेक्स गुड़िया किन्नुहोस्
हाम्रा सस्तो पुरुष सेक्स डलहरू प्लैटिनम क्युरबाट बनेका छन् सिलिकॉन सेक्स पुतली or TPE छ गुडिया, जसमा वास्तविकताको ठूलो भावना छ। तिनीहरु भित्र एउटा स्टील कंकाल हुन्छ तपाईलाई उभिन वा तपाईको मनपर्ने मुद्रा मान्न अनुमति दिन। हामी उच्च गुणस्तरको पुरुष प्रेम पुतलीहरू उत्पादन गर्न सटीक निर्माणको साथ उत्तम उपलब्ध सामग्रीहरू संयोजन गर्छौं। यी पुतलीहरूको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण शारीरिक रूपमा सही लिंग हो।
Lifelike सिलिकॉन पुरुष Sexdoll
यथार्थवादी पुरुष यौन पुतली पोर्नसँग महिला पुतलीहरू भन्दा कम शरीर र प्रकार्य विकल्पहरू छन्, तर तपाईं अझै पनी विभिन्न केश, आँखा, अनुहार आकार, र छाला टोन विकल्पहरू प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ जुन हामी प्रदान गर्दछौं। यदि तपाईं पुरुषहरूका लागि उत्तम पुतलीहरू खोज्दै हुनुहुन्छ र मूल्य कुनै मुद्दा होईन भने, त्यसोभए तपाईंले निश्चित रूपमा नयाँ नयाँ पुतली स्टोर अर्डोल चेक आउट गर्नुपर्नेछ।
A पुरुष सिलिकॉन सेक्स पुतली साँच्चै च्यातिएको व्यक्ति हुन योग्य छ। मांसपेशी पुरुष छाला नरम महिला छाला भन्दा धेरै फरक महसुस गर्छ। यो आशा गरिन्छ कि पुरुष पुतलीहरू महिला पुतलीहरू भन्दा बलियो र हल्का हुन्छन्। पुरुष पुतलीहरू सामान्यतया ठूला हुन्छन्। अर्को ठूलो भिन्नता पुरुष पुतलीको बट हो। यो सामान्यतया महिला पुतली भन्दा बलियो महसुस गर्छ। अनुहारको आकार, हातको आकार र पुरुष सेक्स डलसँगको सेक्सको अनुपात जस्ता अन्य कुराहरू पनि फरक हुन्छन्।
पुरुष जस्तै देखिने पुरुष सेक्स डलहरू। केही व्यक्तिहरू साँच्चै टुक्रिन योग्य छन्। आफ्नो यौन जीवनमा रमाइलो थप्न चाहने जोडीहरूको लागि उपयुक्त! जीवित मानिसहरू बिना सुरक्षित थ्रीसम। मांसपेशी पुरुष छाला कोमल महिला छाला भन्दा धेरै फरक छ। यौन पुतलीहरू, कृत्रिम बुद्धिमत्ता भएका पुरुषहरू, महिला पुतलीहरू भन्दा बलियो र हल्का हुने अपेक्षा गर्नुहोस्। अन्य चीजहरू, जस्तै अनुहारको आकार, हातको आकार, र फकिंग ए पुरुष यौन पुतली अनुपात पनि फरक हुनेछ।
पुरुष सेक्स डल फक पनि सामान्यतया ठूलो हुन्छ। नरम छाला, पूर्ण मासु, फर्म, र टिकाऊ। यो एक ब्लो-अप पुरुष सेक्स पुतली होइन। चिकनी नक्काशी देखि सुन्दर झाडी सम्म, मोटा देखि प्रतिभाशाली सम्म, पुरुष को लागी हाम्रो सेक्स डल हातले बनेको छ। भिन्नताहरू समायोजन गर्न, हाम्रो पूर्ण शरीरको पुरुष सेक्स पुतलीमा हटाउन सकिने यौन अंगहरू छन्। यसलाई डिल्डो जस्तै प्रयोग गर्नुहोस्। यो निस्सन्देह, तल-अप मन पराउने पुरुषहरूको लागि पनि उपयुक्त छ। अर्को ठूलो भिन्नता पूर्ण आकारको पुरुष सेक्स पुतलीको बट हो। यो सामान्यतया महिला पुतली भन्दा बलियो लाग्छ। रोबोट पुरुष सेक्स डल भविष्यमा देखा पर्न सक्छ।